Imwe-pani ine mbiri yekushanda chinzvimbo skrini chinja:
● Extruder screw inogona kudhirowa kubva pachishanduko chinochinja zvakananga, zviri nyore kubvisa uye kuchenesa,
● Inotora yepamusoro yekumanikidza inochinja yekuisa chisimbiso tekinoroji, kuburikidza nekumanikidza kwema polymers kutyaira zvikamu zvechisimbiso, kuti uwane iyo yakanakisa yekuisa chisimbiso mhedzisiro uye nekuchinja skrini nekukurumidza.
● Mabhaudhi emhando inopinza anobatanidza iyo extruder.
● Modular mubatanidzwa, inokodzera akasiyana standard standard extrusion muchina, uye zviri nyore kuchenesa.
● Inotora mudziyo wekupisa wemukati, kuitira yakachengeteka uye kuchengetedza simba. Tambo dzakakomberedzwa zvizere, pakuonekwa kwakanaka.